kuchinja kubva pamvura zhinji kuenda kuyedzwa kunonoka
Kuru Agile Kuchinja kubva kuWallfall kuenda kuAgile Testing
Kuchinja kubva kuWallfall kuenda kuAgile Testing
Kana kambani ikafunga nezvekuchinja kubva kuWallfall kuenda kuAgile kuyedzwa, ndedzipi nzvimbo dzakakosha kutarisisa kune inoshanda Agile Kuedzwa?
Kuedzwa sei muAgile kunoenzaniswa neiyo yeWallfall modhi? Ndeipi seti yezviitiko yakakosha kuti vaedze vazive uye vaite?
Kuedza Kwese Mukuvandudza
Chinhu chekutanga kunzwisisa ndechekuti mukukurumidzira kukura, kuyedzwa kunosanganisirwa muhupenyu hwese; kuyedza software ichienderera mberi mukukura kwayo kwese.
Mune echinyakare Waterfall modhi, kuyedza idanho hombe uye inosiyiwa kusvika kumagumo ebudiriro, nepo muAgile, kuyedzwa kudiki asi kazhinji uye kunoitika mukati mekusimudzira.
Kuedzwa mukati mekusimudzira kunorevawo kuti software iri muchimiro chinosununguka mukati mekuvandudza, saka inogona kutumirwa chero pazvinenge zvakakodzera.
MuMvura yemvura modhi, isu tinodzidziswa kufunga muzvikamu, senge dhizaini dhizaini, chikamu chekusimudzira uye chikamu chekuyedza. Agile kuvandudza haina chikamu chakasiyana cheyedzo zvakadaro. Vagadziri vanonyanya kuita zvekuyedza, vachinyora zvadzo zvadzo zvinodzokororwa zveyuniti kusimbisa kodhi yavo.
Mushambadzi Kutora chikamu mukuyedza
Iine otomatiki yuniti bvunzo, kuyedzwa kunogona kuitwa sechikamu chekuvaka, kuve nechokwadi chekuti maficha ese ari kushanda nemazvo nguva imwe neimwe iyo kuvaka kunogadzirwa. Nenheyo yakasimba yezvakanaka zveyuniti bvunzo kufukidza, vanogadzira vanozonzwa vane chivimbo chekuratidza kodhi zvakare.
Kuedzwa muAgile zvakare kunoreva kutanga kutanga. Izvi zvinoreva kuti QA yaizofanirwa kuve nechekuita kubva padanho rekugadzira, kunzwisisa maficha uye nyaya uye kutanga kugadzirira uye kunyangwe kunyora bvunzo kumberi.
Chimwe chinhu chakakosha Test automation yekukwanisa kuita bvunzo zvichiramba sezvo chigadzirwa chiri kugadzirwa. Ichi hachisi cheyuniti chete otomatiki bvunzo, asi API uye UI otomatiki bvunzo zvakare.
Yakabatanidzwa uye Muchinjikwa Anoshanda Matimu
Kuchinjira kuAgile ndiko kuyambuka-kunoshanda kweprojekiti timu basa. Uku kubatana kwekubatana hakuitwe kune ekuyedza zviitiko. Vagadziri vanofanirwa kubatsira nehurongwa hwekuyedza uye kugadzira maficha, vaongorori vebhizinesi vanobatsira nekunatsa nyaya.
Nhengo yega yega yechikwata inoshanda pane nyaya kudzamara nyaya yese yaitwa, zvinoreva kuti yakagadziridzwa uye kuyedzwa. Vagadziri, Vagadziri uye maTesters vanoshanda pamwechete muparutivi saka kuzadzisa chinangwa chakafanana uye ivo vese vanofanirwa kuziva izvo zvakakosha kuti zvinhu zviitwe.
Kuita sechikwata ndiyo yakakosha poindi yekuchinja kubva kuWallfall kuenda kuAgile Testing. Iyo Kambani inogona kusarudza kuchinjira kuAgile Testing asi vanhu vanofanirwa kutsigira iyi shanduko kuti ibudirire.
Iko hakuna timu yekuyedza muagile.
Hunhu hwepfungwa, Yese-timu Nzira
Chinangwa chekudzivirira kuremara pane kuona kuremara.
Nekutanga kutora chikamu kwevaedzo muchirongwa, ivo vanogona kubatsira mukuziva makisheni akakosha anodikanwa kuyedza nyaya. Kazhinji nzira dzekugamuchirwa dzinonyorwa seyedza yekubatana pakati peMugadziri Wezvigadzirwa, Mugadziri uye Muedzo - iwo matatu maAmigos.
Izvi zvinoona kuti chero chinhu chiri kuvakwa chinoyedzwa uye chinonzwisiswa nevose vane chekuita nacho. Zvakare, sezvo vanhu vazhinji vari kubatanidzwa mukutsanangura nzira yekutambira uye iyo 'Tsananguro yeZvakaitwa', zvikanganiso zvinogona kugadziriswa kare uye pakupedzisira chigadzirwa chakakodzera chakavakwa mushe.
Wese munhu anobatanidzwa uye anoona nezve mhando yechigadzirwa.
Zvishoma zvinyorwa, Kubatana kukuru
Mukukudziridzwa kweAgile, pane kusimbiswa kwakawanda mukukurukurirana nekubatana kujekesa zvinodiwa kupfuura nzira yechinyakare yezvakanyorwa uye zvinyorwa.
Kunyangwe izvo zvinodikanwa zvichigona kujekeswa kune imwe nhanho mukusimudzira kusingagadzirisike, zvichiri kugona kuti zvidikanwi zvive zvine mutsindo uye zvisina kukwana, uye kuti nhengo dzechikwata dzive nekunzwisisa kwakasiyana kwezvinodiwa.
Saka izvi zvinorevei kune Agile Tester? Chinhu chinowanzoitika kune vanoedza kuchinjira mukubudirira kweAgile ndechekuti havazive chaizvo zvavari kuyedza. Ivo havana ruzivo rwakadzama rwekuyedza, saka vangazviedze sei?
Iwe haufanire kuve neakadzama magwaro kuti utange nekuyedza. Nguva zhinji, vaongorori vane tsika vanogona kushandisa kutonga kwavo uye njere kuti vagone kugonesa chigadzirwa. Domain zivo inova inonyanya kukosha.
Vanoongorora vanofanirwa kuve nechivimbo chekushanda zvakanyanya kubva paruzivo rwavo rwekuti chii chakanaka chinotaridzika. Chaizvoizvo haisi chete nyaya yekutevera bvunzo script, kuve nechokwadi chekuti software inoita zvarinotaura mune iyo spec.
nyowani nyowani hondo nhare mutambo
Candy Crush Soda Saga, iyo yakateerana neCandy Crush Saga, yakatangwa-nyoro paApple
Maitiro ekudzura Galaxy S6 nekudzvanya kamwe chete usinga gumbure iyo KNOX counter (Verizon inosanganisirwa)
GoPro app inodzokororwa seQuik ine zvishandiso zvine simba zvekugadzirisa zvevashandisi veIOS uye Android
Kuenzanisa Samsung Galaxy S4 vs HTC One
AT & T inofumura tsvina-yakachipa prepaid smartphone ine ina makamera uye hombe bhatiri
T-Mobile inodonhedza iyo Samsung Galaxy S10 +, inopa madhiri paS10 uye S10e
Apple & apos; s AirPods Pro yakarova itsva-yenguva-yakaderera mutengo mune yakapenga (yakagadziridzwa) dhiri